တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: ပဟေဠိများတဲ့ လမ်းစဉ်
မတည်မြဲတဲ့ စည်စိမ်းတွေကို ယစ်မူးခြင်းက
ဘဝပင်လယ်မှာ ကိုယ်မောင်းနှင်တဲ့ လှေ..
ပြိုကျ ပျက်စီးသွားတဲ့ တနေ့တော့
ခဝါချလို့ ဦးချို ကျိုးခဲ့ရင်...
အဆိပ်ကုန်ခန်း မာန်ကုန်ခန်းတဲ့ တနေ့...
ကံကောင်းလို့ လူ့ဘောင် တောင်ထွဋ် တနေရာမှာ
ဇိမ်ခံစည်စိမ်းတွေ အပြည့်အဝ ခံစားရပေမဲ့
ကံမှောက်လို့ ဇိမ်ပျောက်တဲ့ တနေ့တော့
မတည်မြဲတဲ့ အရူးချမ်းသာနဲ့ ရာထူးတွေကို
ပြဇာတ်ရေး ဆရာ အရေးကောင်းပေမဲ့
အလင်းရောင်မရ ရေ မရတဲ့
အဆင်မပြေတဲ့ ညကို ဖြတ်သန်းနိုင်မလား..?
လှုပ်ရှားလာတဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေ ကြည့်ပါ
သူတို့ထဲမှာ လေ့လာ သင်ယူပါ..
သူတို့ထဲမှာ ပညာရှင်တွေ ရှိတယ်...
သူတို့ထဲမှာ ဥပဒေ တည်ဆောက်ပါ..
သူတို့ထဲမှာ တိုးတက်မှုကို တည်ဆောက်ပါ..
သူတို့ထဲမှာ လွတ်လပ်ရေး လုပ်ပါ..
သူတို့ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ပါ..
သူတို့ထဲမှာ လိုအပ်နေတာ ရှိတယ်..
သူတို့ထဲမှာ မပြည့်စုံမှုတွေ ရှိတယ်..
သူတို့ဆီမှာ မေတ္တာတွေ ရှိတယ်..
သူတို့ကို အလင်းရောင် ပေးလိုက်ပါ..
သူတို့ လုပ်နိုင်တဲ့ အင်အားနဲ့ တိုးတက်ရေးကို
သူတို့ တာဝန်သိ စိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်...
အဲဒါမှာ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းစဉ်ကောင်းဖြစ်မှာ သေခြာတယ် မဟုတ်လား..?
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:36 AM